သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ - Pedia ကိုးကားသည်
ထိရောက်သောနေ့စွဲ - ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၁၉
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာမှာ https://www.quotespedia.org ဖြစ်သည်။
Quotespedia (“ us”,“ we”,”“ our”) သည် https://www.quotespedia.org ဝက်ဘ်ဆိုက် (“ ၀ န်ဆောင်မှု”) ကိုလည်ပတ်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သင်နှင့်ထိုအချက်အလက်နှင့်ဆက်စပ်သောရွေးချယ်မှုများကိုသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသောအခါနှင့်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒများနှင့် ပတ်သက်၍ ဤစာမျက်နှာကသင့်အားအကြောင်းကြားသည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤပေါ်လစီနှင့်အညီအချက်အလက်ကောက်ယူရန်နှင့်အသုံးပြုရန်သင်သဘောတူသည်။ ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီ၌သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါကဤသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီတွင်အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် https://www.quotespedia.org မှရရှိသောအဓိပ္ပါယ်များနှင့်တူညီသည်။
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အချက်အလက်အမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အားမည်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအထွေထွေအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည်။ ဤအသုံးပြုမှုအချက်အလက်တွင်သင်၏ကွန်ပျူတာ၏အင်တာနက်ပရိုတိုကောလိပ်စာ (ဥပမာ IP လိပ်စာ)၊ browser အမျိုးအစား၊ browser ဗားရှင်း၊ သင်ကြည့်ရှုသောကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာများ၊ သင်၏လည်ပတ်ချိန်နှင့်နေ့စွဲ၊ ထိုစာမျက်နှာများပေါ်တွင်သုံးစွဲရသောအချိန်၊ device ကိုအမှတ်အသားနှင့်အခြားအဖြေရှာတဲ့ဒေတာ။
ခြေရာကောက် & ကွတ်ကီးဒေတာများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိလှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံရန်နှင့်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် cookies နှင့်အလားတူခြေရာခံခြင်းနည်းပညာများကိုအသုံးပြုသည်။
ကွတ်ကီးများသည်အချက်အလက်အနည်းငယ်သာရှိသောဖိုင်များမှာအမည်မသိထူးခြားသောအမှတ်အသားပါဝင်သည်။ ကွတ်ကီးများကိုသင်၏ဘရောက်ဇာသို့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုမှပို့။ သင်၏စက်ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်နှင့်ခြေရာခံရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အားတိုးတက်စေရန်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် beacons, tags နှင့် scripts များလည်းအသုံးပြုသောခြေရာခံသည့်နည်းပညာများဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏ browser ကို cookies များအားလုံးကိုငြင်းဆန်ရန် (သို့) cookie တစ်ခုအားမည်သည့်အချိန်တွင်ပို့နေသည်ကိုညွှန်ပြနိုင်သည်။ သို့သော်သင်သည် cookies များကိုလက်မခံပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုသင်အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
session ကွတ်ကီး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလည်ပတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Session Cookies ကိုအသုံးပြုသည်။
ကြိုက်နှစ်သက်သောကွတ်ကီးများ။ သင်၏စိတ်ကြိုက်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောချိန်ညှိချက်များကိုမှတ်မိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Preference Cookies ကိုအသုံးပြုသည်။
လုံခြုံရေးကွတ်ကီးများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Security Cookies ကိုအသုံးပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသို့မဟုတ်တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရန်
နည်းပညာဆိုင်ရာကိစ္စများ, detect တားဆီးများနှင့်ဖြေရှင်းရန်
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို cookies တွေကိုကိုသုံး
ကွတ်ကီးသည်သင့်ကွန်ပျူတာ၏ hard drive ပေါ်တွင်နေရာချရန်ခွင့်ပြုချက်တောင်းသည့်ဖိုင်ငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သဘောတူသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဖိုင်ကိုထည့်ပြီး cookie သည်ဝဘ်အသွားအလာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ကူညီနိုင်သည်။ ကွတ်ကီးများကဝဘ်အပလီကေးရှင်းများကသင့်ကိုတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်တုန့်ပြန်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဝဘ်အပလီကေးရှင်းသည်သင်၏ ဦး စားပေးချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်မှတ်မိခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များ၊ အကြိုက်များနှင့်မနှစ်သက်မှုများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်စာမျက်နှာများကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုသိရှိရန် traffic log cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာအသွားအလာနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့် website ည့်သည်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတိုးတက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုစာရင်းအင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာအသုံးပြုပြီးအချက်အလက်များကိုစနစ်မှဖယ်ထုတ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် cookies များသည်သင့်အားမည်သည့်စာမျက်နှာများကိုသင်အသုံးဝင်ကြောင်းနှင့်သင်မသုံးသောအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့အားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ cookie သည်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်သင်နှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမျှကျွန်ုပ်တို့အားမရရှိနိုင်ပါ။ သင်သည် cookies များကိုလက်ခံရန်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဝဘ်ဘရောက်ဆာအများစုသည် cookies များကိုအလိုအလျောက်လက်ခံသော်လည်းသင်ကနှစ်သက်လျှင် cookies များကိုငြင်းပယ်ရန်သင်၏ browser setting ကိုပြုပြင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အားသာချက်များကိုအပြည့်အဝရယူခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည်။
ထို့အပြင် Quotespedia သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာများကိုအင်တာနက်ပေါ်ရှိ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အမျိုးမျိုးတွင်ပြသရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။
ဂူဂဲလ်၏ cookie များအသုံးပြုခြင်းကိုသင်ဂူဂဲလ်သို့သွားရောက်ခြင်းအားရှောင်ရှားနိုင်သည် ကြော်ငြာချိန်ညှိချက်များ.
ဂူဂဲလ်အပါအ ၀ င်တတိယပါတီရောင်းချသူများသည်သင်၏ယခင်ဝက်ဘ်ဆိုက်လည်ပတ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ကြော်ငြာများကို ၀ န်ဆောင်ရန် cookies များကိုသုံးသည်။
ဂူဂဲလ်၏ DoubleClick cookie ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ Quotespedia Blog နှင့် / သို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်ရှိအခြားဆိုဒ်များသို့သင်၏လည်ပတ်မှုပေါ် မူတည်၍ ၎င်းနှင့်၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကသင့်အားကြော်ငြာများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
စိတ်ဝင်စားမှုအခြေပြုကြော်ငြာခြင်းအတွက် DoubleClick cookie ကိုအသုံးပြုခြင်းအားသင်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည် ကြော်ငြာချိန်ညှိချက်များ။ (သို့မဟုတ်လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် aboutads.info.)
တတိယပုဂ္ဂိုလ်များသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိအခြားနေရာများမှသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရယူရန်နှင့်တိုင်းတာခြင်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပစ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာများအတွက်ထိုသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရန် cookies များ၊ ဝဘ်ဘေကွန်နှင့်အခြားအလားတူနည်းပညာများကိုသုံးနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု၏အသုံးပြုမှုကိုစောင့်ကြည့်ရန်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ Third-party Service Providers သုံးနိုင်ပါသည်။
Google ၏ privacy ကိုအလေ့အကျင့်အပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက, Google Privacy & သတ်မှတ်ချက်များကိုဝဘ်စာမျက်နှာသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး: https://policies.google.com/privacy?hl=en
အီးမေးလ်ဖြင့်: [အီးမေးလျ protected]